Umaka: lab42 | Martech Zone
Ingabe Ukukhangisa Komkhiqizo Kuyasebenza?
NgeSonto, uJanuwari 6, 2013 Douglas Karr
Ingabe ukukhangisa ngomkhiqizo kuyasebenza? ULab42 ubuze lokho nje wahlanganisa le infographic nemiphumela. Sinqume ukubheka ukuthi abathengi bazibheka kanjani izimangalo zokukhangisa, futhi imibono yabo yadweba isithombe esithandekayo. Bangu-3% kuphela abangachaza izimangalo ezikhangisweni njengezinembe kakhulu, futhi ama-21% kuphela angachaza izikhangiso njengezilungile ngandlela thile. Sithole ukuthi iziphi izingxenye zezikhangiso abangazikholelwa- cishe zonke zikhombe ku-Photoshop njengengxenye yokukhangisa